mskhanal 11:40 PM
त्यो निकै अघी को समय। जती बेला म स्कुल मा पढ्दै थिए। एक जना ब्यक्ती जो म भन्दा सिनियर थियो र हाम्रो गाउँमा प्रतिभा भएको ब्यक्ती मा गनिन्थ्यो उस्ले मलाई एउटा प्रश्न सोधेको थियो। मलाई त्यती बेला त्यो प्रश्न को जवाफ थाहा थिएन। उस्ले मलाई भन्यो तिमी फेल भयौ। मेरो अभिमान ले कहाँ त्यती सजिलै हार मान्थ्यो र। मैले भने परिक्षा मा त म पढेर आउछु र लेख्छु नि। त्यती बेला उसले भनेको थियो "महेश मान्छे को जीबन मा हर प्रहर परिक्षा हुन्छ । तिमी अरु परिक्षा मा जे सुकै गर तर मैले अहिले लिएको परिक्षा मा तिमी फेल नै भयौ. " उसले भनेको कुरा को गहन अर्थ त्यती बेला मैले कसरी बुझ्न सक्थें र? अहिले बल्ल मलाई थाहा भएको छ कि उसले भनेका कुरा हरु कती गहन र सान्दर्भिक थिए।
एक पटक उ बिदा मा घर मा गएको थियो। त्यती बेला म चेस मा अब्बल मानिन्थेँ। उसले नि त्यो कुरा थाहा पाएछ। उसले मलाई चेस सिकाइदिन भन्यो। मैले नि उसलाई सिकाइदिए। पहिलो खेल मैले सजिलै उसलाई हराए। दोश्रो खेल मा अली गर्हो भयो। तेस्रो खेल मा म उ बाट हारें । यसबाट थाहा हुन्छ कि उ कती प्रतिभाबान थियो।
केही बर्ष पछी जती बेला म त्रिचन्द्र क्यम्पस मा आइएस्सी पढ्थें। उ र म घर बाट सङ्गै काठमाडौं आउँदै थियौं। उ बुटवल बाट हातमा (word power made easy ) भन्ने किताब हात मा लिएर आएको थियो। र पेन्सिल ले त्यस मा भएको अभ्यास हरु गर्दै आएको थियो। मैले त्यो किताब को बारेमा उ सङ्ग त्यस्को बारे मा सोधेको थियें। उसले त्यो अङ्ग्रेजी भाषा सुधार्ने किताब भएको बतायो। र मलाई नि त्यो किताब अध्ययन गर्न सुझाब थियो। त्यती बेला मैले त्यो किताब अङ्ग्रेजी भाषा मा प्रखर भएका लाई उपयोगी भएको किताब ठान्थे। तर पछी त्यो किताब मैले किनेर पढें। त्यती बेला उसले रेफर गरेको किताब त्यती बेला नै किन किनिन भनेर थक्थक लाग्यो।
म काठमाडौं आएकै बेला उ सँग भेट हुँदा उस्ले अङ्ग्रेजी गीत सुनेको हुन्थ्यो। मैले तिमीले यस्ता गीत बुज्छौ र भनेर सोधेको थियें। उसले त्यती बेला तिनी गीत नबुझेको तर संगीत को लागि मात्र सुनेको बतायो। उसले बाटएको त्यो कुरो मैले अहिले मात्रै बुझ्दैछु कि संगीत को भाषा एक मात्र हुन्छ।
केहीसमय पछी उ अमेरिका जाने भयो। उसले जानु अघी अनमनगर को एक रेस्टुरेन्टमा हामीलाई ट्रिट दिएको थियो। र मलाई बिज्ञान को बारेमा र करीयर को बारेमा निकै सल्लाह दिएको थियो।
र आज बिहान म बिस्तारा मा नै भएको बेला मेरो ड्याडी ले फोन गरेर भन्नु भयो भेसु को अमेरिका मा निधन भयो रे। समय को खेल हो या अरु कुनै बिडम्बना जती बेला उनले बताएका कुरा मैले भर्खर भर्खर बुझ्न थालेको छु यती नै बेला उनको निधन भएको छ।
यस बेला अरु त के नै भन्न सक्छु र। प्रिय दाजु र मित्र भेसराज हार्दिक श्रदान्जली